လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုင်တဲ့ နေရာမှာ ယုံကြည်မှုက အင်မတန်မှ အရေးကြီးတယ်။ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြမယ်ဆိုရင် အစစအရာရာ အောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ အုတ်မြစ်ခိုင်မာပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားကို ယုံကြည်မယ်။ အလုပ်သမားက အလုပ်ရှင်ကို ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်း အတွက် productivity တက်လာစေမှာ ဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြစ်စေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး စတင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီ ဆိုရင် သူ့အပေါ် လုပ်ငန်းကနေပြီး ယုံကြည်မှု စတင် ပေးအပ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင် အသစ်မှာ စတင်ဝင်ရောက်စ ၀န်ထမ်းအသစ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်ပြနိုင်အောင် အခွင့်အလမ်းပေးရမယ်။ တကယ်တမ်း ခန့်အပ်လိုက်တဲ့ ရာထူးနဲ့ ခံစားခွင့်ဟာ သူ့အတွက် ထိုက်တန်မှုရှိတယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်ဖက်က ခံယူတဲ့အတွက်သာ ဆက်လက်တာဝန် ပေးခန့်အပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ စေတနာသုံးတန် ပြဌာန်းပြီး အပိုဆောင်း ခံစားခွင့် ပေးထားတာမရှိပါဘူး။
ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ တာဝန်ယူရတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ ၀န်ထမ်းရဲ့ အသက်အရွယ်ဟာ ကွာဟမှုတွေရှိလာတယ်။ အယင်က အသက် ၃၀ကျော် ၄၀ တွေ တာဝန်ယူတဲ့နေရာတွေမှာ အခု ၂၀ ကျော်တွေ ၀င်ရောက်လာတယ်။ အယင်က ၂၀ ကျော် ၃၀ တွေ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အခု အသက်၂၀ အောက် လူငယ်တွေ အစားထိုး ၀င်ရောက်တာဝန်ယူလာကြတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ လူငယ်နဲ့ လူကြီး အမြင် မတူမှုက ရံဖန်ရံခါမှာ အင်မတန် အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ လူငယ်တွေ ဖြစ်ကြတာက တကြောင်း၊ အတွေ့အကြုံ နုနယ်သေးတာက တစ်ကြောင်းမို့ လူကြီးတစ်ယောက်လောက် နေရာတိုင်းမှာ Perfect ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ သို့ပေမဲ့ လူငယ်တွေကို နေရာ မပေးလို့ မရဘူးဆိုတာ လူကြီးအရွယ်က လူတွေ သိနား လည်ပေးဖို့လိုအပ်လှပေတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ အခုလက်ရှိ အမှန်တကယ် လှုပ်ရှားနေတဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်း(Working Force) ထဲမှာ လူငယ်တွေရဲ့ တာဝန်ယူနေမှု အပိုင်းကိုလည်း မေ့မထား ဖို့လိုအပ်ပေတယ်။
ဆိုတော့ကာ အထက်အကြောင်းအရာ ၂ ခုကို ပြန်ပေါင်းရရင် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လူငယ် အလုပ်သမားတွေ ခန့်အပ်တဲ့အခါ ဦးစွာပထမ လူငယ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းရည်ကို Under Estimate မလုပ်မိဖို့ လွန်စွာမှ အရေးကြီးတယ်။ Under Estimate လုပ်လိုက်မိတဲ့ နောက်မှာ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ယုံကြည်မှု လျော့ပါး ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်။ အဲဒီယုံကြည်မှု လျော့ပါး ပျောက်ဆုံးမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာနိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားက လုပ်ငန်းမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုများနဲ့ အခန့်မသင့်တဲ့အချိန်မှာ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများပါ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အထိ အန္တရာယ်ြ ကီးမားတဲ့ အတွက် အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖြစ်စေရေးအတွက် ယုံကြည်မှု အခြေခံသော ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် စတင် တည်ဆောက် သင့်ပါကြောင်း။
ဆက်လက် တွေးခေါ်ဖို့ ဝေမျှခြင်းပါ။
let you know, you may have hit the nail on
idea is excellent; the problem is something that
Feel free to visit my website :: socialbizconnect.com
more or figuring out more. Thanks for great information I used to be searching for
Here is my web blog ... http://www.aboriginaljobseeker.com/blogs/entry/Property-For-Sale-In-Costa-Blanca-For-2013-05-16-0
Check out my blog post :: http://www.antiochpedia.org
I intended to write you the bit of word so as to say thanks a
lot the moment again on your beautiful views
you've discussed at this time. It is open-handed with people like you to grant unreservedly just what some people could
possibly have distributed as anebook to
generate some bucks on their own,
fact that you could have done it in the event you desired.
likewise acted likeafantastic way to know that someone else have the same desire like my personal own to learn very much more when it comes to this condition.
I'm sure there are some more pleasurable opportunities up front
My website :: inforaise.net
Feel free to visit my web-site: themostcake.co.uk
you please lengthen themabit from
Visit my weblog: efriends.411nigeria.net
my web-site Cartoons.org
feels too complex and very wide for me. I'm
looking forward in your subsequent post, I’ll attempt to get
Feel free to visit my web blog; http://hollar.se/
with imminent post. Thank youamillion and please
my web blog; www.retailshops.com
Check out my site :: compusafe.net.au
Visit my weblog :: http://www.szakibazis.com
Thank you foor any other informative site. Where else may just I get that ttype
off information written in suchaperfect method?
I have been at the look out forr such info.
Here is my webpage; gaming